ဦးသိန်းညိုပိုးယက်လုပ်ခြင်းအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ | မြန်မာသွားရောက်ကြည့်ရှု
ဦးသိန်းညိုပိုးယက်လုပ်ခြင်းအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ အမရပူရအတွက်အများအပြားပိုးယက်လုပ်ခြင်းအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုဖြစ်တယ်, ဒေသခံသိမ်းသွားလေ၏လှပသောပိုးအဝတ်ကိုလုပ်ရှိရာမန္တလေး. အဖြစ်ကောင်းစွာပိုးအဖြစ်သူတို့လည်းဝါဂွမ်းမှထွက်ဆင်တူဝတ်သောအဝတ်ကိုအောင်.
အဆိုပါပိုးစျေးဆိုင်တတစ်ဦးကအလည်အပတ်များသောအားဖြင့်အင်းနဲ့တူသောနေရာများသို့သွားရောက်ခြင်းအခါသင်ယူစေခြင်းငှါမဆိုတစ်နေ့ခရီးစဉ်များတွင်ပါဝင်သည် (အင်း) သို့မဟုတ်စစ်ကိုင်း.
၏နောက်ဘက်မှာ ဦးသိန်းညိုပိုးအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ ယောက်ျားမင်းသမီးတက်ကြွအရောင်မျိုးစုံအတွက်ပိုးအသေခံအလုပ်လုပ်. သူတို့ကပိုးခန်းခြောက်ခြင်းနှင့် reels ပေါ်မှာလေ. အဆိုပါအများအပြားအရောင် reels အဟောင်းစတိုင်ရက်ကန်းမှာထိုင်သူမိန်းကလေးငယ်အားပေးပြီးမှနှင့် elaboratly patterned ပိုးအဝတ်ကိုမျိုးကိုရက်နေကြသည်.
လူတို့သညျရဲ့ဗားရှင်း (ထို့အပြင် Paso ကိုခေါ်) လုပ်အတွက်ယေဘုယျအားဖြင့် cylindrical နေကြတယ်, သငျသညျသူတို့အထဲသို့ခြေလှမ်း. The Lady ဗားရှင်း (ထို့အပြင် htamein ကိုခေါ်) စတိုင်န်းကျင်တစ်ခုတည်းထုပ်ပိုးပြီးဖြစ်ပိုမိုကျရောက်နေတဲ့များမှာ.
အဆောက်အဦးရဲ့အရှေ့ဘက်မှာအရောင်းဆိုင်၌သငျတို့သညျရဲ့သို့မဟုတ်အမျိုးသမီးဖြစ်စေလုံချည်ယ်ယူနိုင်ပါသည်သို့မဟုတ်လှပ scarves မဆို, စားပွဲပေါ်မှာအပြေးသမား, ခေါင်းအုံးအမှုများစသည်တို့ကိုခင်းကျင်းပြသ.
သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ဖန်တီးမှုချုပ်အချို့အိမ်ပြန်ယူချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာမီတာဖွငျ့လွင်ပြင်သို့မဟုတ် patterned ဖြစ်စေပစ္စည်းအတိုအရှည်ကိုဝယ်ခြင်းငှါဖြစ်နိုင်သောကြောင့်. အနည်းငယ်သာအရောင်းဖိအား.
သငျသညျသွားရောက်ကြည့်ရှုတဲ့အခါမှာအမရပူရသေချာသင်ဦးသိန်းညိုပိုးကဲ့သို့ပိုးအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ၏တဦးတည်းသို့ pop လုပ်. အဆိုပါဝန်ထမ်းများသောအားဖြင့်ပတ်ပတ်လည်ကိုသင်ပြသနိုင်ဖို့ပျော်ရွှင်နေကြသည်.